ရှလွတ်ရှလွတ်နဲ့ပြေးမလွတ်အောင် တရစပ်တည်းဝါးစားချင်စိတ်တွေ တစ်ဟုန်ထိုးဖြစ်ပေါ်လာစေမယ့်… – FoodiesNavi
ကိုရီးယားအစားအစာတွေကိုမှ ရင်ခုန်တတ်တာပါဆိုတဲ့အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် အရမ်းစားလို့ကောင်းပြီး မြန်မာခံတွင်းနဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားစေမယ့် ” Summit Korea “ဆိုတဲ့ကိုရီးယားစားသောက်ဆိုင်လေးအကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော်။ ပုံမှန်စားနေကျ ကိုရီးယားအစားအစာဆိုင်တွေနဲ့မတူတဲ့ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ ဟင်းလျာတိုင်းမှာ ထိမိတဲ့အရသာဓာတ်တွေ ခံစားရရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိထိမိမိအရသာတွေထဲမှာတော့ ဝက်သားပြားကင်ရဲ့အရသာက တော်တော်ကြီးထူးကဲတယ် ချိုမြလတ်ဆတ်တဲ့သုံးထပ်သားတွေကို နူးအိမွှေးပျံ့နေအောင်ကင်ပေးထားပြီး ဝက်သားကင်ချီစွပ်ချဉ်စပ်လေးနဲ့ တွဲဖက်စားလိုက်တော့ ရှလွတ်ရှလွတ်နဲ့ပြေးမလွတ်အောင် တရစပ်တည်းဝါးစားချင်စိတ်တွေ တစ်ဟုန်ထိုးဖြစ်ပေါ်လာစေမှာပါ ? နလန်ထကာစလူနာတွေနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝအစားအစာတွေကိုမှ အပြတ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားဂျင်ဆင်းကြက်ပေါင်းနဲ့ဆို လုံးဝဖလန်းသွားမယ်။ အရသာကဆိမ့်သက်ပြီး လျှာပေါ်စွဲမက်သွားမှာ ? အသေအချာပဲ။ အမဲသားကိုပြုတ်ပြီး စိမ့်ထွက်ကျလာတဲ့အနှစ်အရသာတွေနဲ့ ရှားပါးပြီးအာဟာရဖြစ်စေတဲ့ ကိုရီးယားငြုပ်သီးမှုန့် ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ပဲပင်ပေါက် ၊ မုန်လာဥအဖြူ/အနီတွေသုံးပြီး ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အမဲစွပ်လေးကတော့ လူကြိုက်အများဆုံးပါပဲ။
ပဲစွပ်လေးလည်းမဆိုးဘူးရယ်။ ပင်လယ်စာ ၊ ပဲကြာဆံ ၊ ပဲပြား ၊ အာလူး ၊ မုန်လာဥဖြူတွေကို ပဲအနှစ်နဲ့ရောစပ်ပြီး မွှေးမွှေးကြိုင်ကြိုင်လေးချက်ပေးထားလို့ မြန်မာပါးစပ်နဲ့တော်တော်ခံတွင်းလိုက်တယ်။ အရသာကထူးခြားသလို ဈေးနှုန်းတွေကလည်းသင့်တင့်လို့ တစ်ခါစားဖူးရုံနဲ့ အထပ်ထပ်သွားစားမိနေမယ့်ဆိုင်လေးပါနော်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ Room No(2) , Level(2) , Hledan Centre , ကမာရွတ်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီခွဲကနေ ည(၈)နာရီခွဲထိပဲဖြစ်ပါတယ်။
Image Source: www.facebook.com/summitkorea